देश हल्लाएको हत्याकाण्ड:न न्याय, न अब आस ! - Sindhuli Saugat
देश हल्लाएको हत्याकाण्ड:न न्याय, न अब आस !
सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७६ साउन १० गते शुक्रवार काठमाडौं
नेपालको अपराध इतिहासकै चर्चित घटनामध्येको एक हो, निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या । राष्ट्रियमात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको ध्यान तानेको कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज एक वर्ष पुगेको छ। हत्यामा को संलग्न थिए वा थियो, घटनास्थल कहाँ हो भन्ने अझै खुलेको छैन ।
पछिल्लाे - गुणस्तरीयतालाई प्राथमिकता देऊ
अघिल्लाे - प्रियंकाले एउटै पोष्टबाट २ करोड कमाउँछिन्